Bruno Fernandes oo doonaya inuu la kulmo Tababarihii hore ee Manchester United, Sir Alex Ferguson – Gool FM
Bruno Fernandes oo doonaya inuu la kulmo Tababarihii hore ee Manchester United, Sir Alex Ferguson
Haaruun May 16, 2021
(Manchester) 16 Maajo 2021. Xiddiga kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa qirtay inuu doonayo inuu la fariisto tababaraha ugu caansan Kooxdaas ee Ferguson si ay uga wada hadlaan sida uu xitaa ku sii fiicnaan karo.
Kaddib markii uu yimid garoonka Old Trafford bishii Janaayo ee 2020, Fernandes ayaa xubin ka noqday kooxda Ole Gunnar Solskjaer, wuxuuna qarka u saaran yahay inuu ku hoggaamiyo koobab kulanka final-ka Europa League.
Hase yeeshe, Fernandes wuxuu indhaha ku hayaa inuu sii fiicnaado, wuxuuna codsaday caawinaad cid kale oo aan ahayn Sir Alex Ferguson inay sidaasi u sameyso.
Isaga oo la hadlayay InsideUnited markii wax laga waydiiyay kulanka Ferguson, Fernandes ayaa yiri: “Taasi waa mid ka mid ah qoomamadayda ugu weyn ee kooxda ilaa haatan.
“Waan la kulmay isaga mar hore, laakiin waligey fursad uma helin inaan la hadlo sidaas ayaana jeclaan lahaa inaan sameeyo.
“Waxaan u maleynayaa qof walba oo daawaday Manchester United waqtiyadii hore inuu xusuusto Sir Alex. [Taasi waa run] aniga ahaan, aniga oo soo koraya oo aan arkayo naadiga, aniga oo taageere u ah kooxda oo aan arkayo horumarka kooxda.”
Red Devils ayaa wajihi doonta kooxda reer Spain ee Villarreal final-ka Europa League ee ka dhici doona Magaalada Gdansk, iyagoo doonaya inay ku guuleystaan koobkan, kaasoo markii ugu dambeysay ee ay qaadaan ay ahayd intii uu hoggaaminayay Jose Mourinho bishii May ee 2017.
Macallin Jose Mourinho oo farriin u soo diray Kooxda Roma kaddib markii ay guuleysatay kulankii Rome Derby